Qoor-Qoor oo ka hadlay doorashadii Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-Qoor oo ka hadlay doorashadii Dhuusamareeb
Qoor-Qoor ayaa lagu eedeeyay inuu qaab aan hufnayn usoo xulay liiska Musharixiinta Aqalka Sare.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Madaxweyne Qoor-Qoor ayaa u hambalyeeyay Senatarada lagu doortay Maanta magaaladda Dhuusamareeb, kuwaasoo Galmudug ku matelaya Aqalka Sare, ee Baarlamaanka 11-aad.
Qoraal uu soo saarey ayuu uga mahadceliyay Baarlamaanka iyo Gudiyadda doorashadda sida habsamida leh ay u qabteen codbixinta, taasoo ay Xildhibaanada ku doorteen 6 Senator, oo u badan kuwa horey kuraasta ugu fadhiyay.
Dad badan ayaa aaminsan in siyaasad lagu kala qeybsadey doorashadda Galmudug, waxayna ahayd mid horey natiijadeeda loo sii saadaaliyay, oo ay kusoo baxeen mushariixintii ugu waaweynaa ee lala rabay Kuraasta.
Lix Kursi ayay Galmudug dooratay waxaa dhiman labo Kursi oo mid kamid ah ay isku hayaan Xaaf iyo Cabdi Qeybdiid oo Gaalkacyo kasoo jeeda, waxaana lagu wadaa in dhawaan midkooda kusoo baxo liiska, iyadoo loo badinayo Senator Cabdi-Qeybdiid.